U daa bilow bilowga ganacsiga, warqad codsi bilaash ah
Hagaaji qaabka qoraalkaaga: isku xirayaasha ...
Posted by Tranquillus | Sep 5, 2020 | Xirfadaha hadalka iyo qoraalka afka
Ma rabtaa inaad abuurto ama la wareegto ganacsi, ha noqoto SAS, SASU, SARL ama mid kale, adoo ilaalinaya shaqadaada hadda? Xusuusnow in shaqaale kasta uu xaq u leeyahay inuu fasax u qaato abuurista ama la wareegida meherad. Intaa waxaa dheer, qodobbada qaarkood waa in lagu xisaabtamo. Waa kuwan habraacyada loo raacayo codsashada fasaxa aasaasidda ama la wareegidda meherad. Waxaa sidoo kale lagu siin doonaa warqad tusaale ah oo codsi ah.
Sidee loo sii wadi karaa codsi fasax lacag ah oo loogu talagalay abuurista ganacsiga?
Markii aad u shaqeyneyso shirkad, waxaa laga yaabaa inaad leedahay qorshe aad ganacsi ku furato. Si kastaba ha noqotee, waxay u baahan tahay xoogaa waqti firaaqo ah qaybtaada. Muhiimadu waxay tahay, ma doonaysid inaad ka tagto shaqadaada hada, laakiin waxaad dooneysaa waqtiga aad ku dhameystirto mashruucaaga. Markaa ogow in shaqaale kasta uu ka faa'iideysan karo fasax si loo abuuro shirkad.
Iyadoo la raacayo qodobka, L3142-105 ee Xeerka Shaqada ee wax laga badalay qodobka 9 ee sharciga n ° 2016-1088, ee Agoosto 8, 2016, waxaad si wax ku ool ah uga codsan kartaa shaqo bixiyahaaga. Intaas waxaa sii dheer, codsigaaga wuxuu ku xirnaan doonaa shuruudo gaar ah.
Si aad uga faa'iideysato fasaxan, waa inaad marka hore waayeelnimo leedahay 2 sano isla shirkad ama isku koox aadna ka faa'iideysan intii lagu jiray 3dii sano ee la soo dhaafay. Sidoo kale waa inaad mashruuc ahaan u yeeshaa ganacsi abuur aan tartan kula jirin midka aad hada ka shaqeyso.
Si kastaba ha noqotee, waad go'aamin kartaafasaxa aad u baahan tahay haddii aysan ka badnayn 1 sano. Waxaad sidoo kale cusbooneysiin kartaa hal sano oo dheeri ah. Si kastaba ha noqotee, ma heli doontid wax mushahar ah muddadan, illaa aad dooratay shaqo waqti dhiman ah. Taasi waxay tiri, waxaad codsan kartaa in lagaa qaado dheelitirkaaga fasaxa ah.
READ Template warqad: furid keydka shaqaalahaaga
Si aad u codsato fasax u abuurista ama la wareegida meherad ama fududaynta CCRE, waa inaad ku wargelisaa loo-shaqeeyahaaga ugu yaraan 2 bilood ka hor taariikhda bixitaankaaga fasaxa, adigoon ilaawin inaad sheegto muddadiisa. Si kastaba ha noqotee, ogow, in waqtiyada kama dambaysta ah iyo shuruudaha helitaanka fasaxaaga lagu dejiyey heshiis wadareed shirkadda dhexdeeda.
Si loo helo CEMR, waa inaad markaa qortaa warqad aad ku dalbaneyso fasax abuur ganacsi. Markaa waa inaad u dirtaa loo-shaqeeyahaaga adoo u diraya boostada adoo adeegsanaya warqad diiwaangashan oo leh qirasho risiidh, ama iimayl. Waraaqdaadu waxay markaa xusi doontaa ujeeddada saxda ah ee codsigaaga, taariikhda aad ka tagayso fasaxa iyo sidoo kale muddadeeda.
Mar haddii loo shaqeeyahaagu helo dalabkaaga, waxay haystaan ​​30 maalmood oo ay ku soo jawaabaan oo ay ku soo ogeysiiyaan. Si kastaba ha noqotee, wuu diidi karaa codsigaaga haddii aadan buuxin shuruudaha lagama maarmaanka ah. Diidmadu sidoo kale way dhici kartaa haddii bixitaankaagu uu cawaaqib ku leeyahay horumarka shirkadda. Xaaladdan oo kale, waxaad haysataa 15 maalmood ka dib helitaanka diidmada inaad dacwad u gudbiso maxkamadda warshadaha haddii aadan aqbalin go'aankan.
Intaas waxaa sii dheer, haddii loo-shaqeeyahaagu aqbalo codsigaaga, waa inay kugu wargeliyaan heshiiskooda 30 maalmood gudahood laga bilaabo helitaanka. Ka-gudub waqtigan kama-dambaysta ah haddii ay dhacdo muujinta loo-shaqeeyahaaga, codsigaaga ayaa loo tixgelin doonaa inuu yahay mid la oggolaaday. Si kastaba ha noqotee, bixitaankaaga waxaa dib loo dhigi karaa ugu badnaan 6 bilood laga bilaabo taariikhda codsigaaga bixitaanka. Gaar ahaan waxay ku jirtaa kiiska halka kan lagu sameeyo isla mudada shaqaalaha kale. Dhaqankan waxaa loo qaatay si loo hubiyo habsami u socodka ganacsiga.
READ Iimayl xirfad leh oo guuleysta wuxuu ku xiran yahay dhowr shuruudood
Ka waran fasaxa kadib?
Ugu horreyntii, waxaad kala dooran kartaa inta u dhexeysa joojinta heshiiskaaga shaqada ama aad sii wadato shaqada. Sidaa darteed, waa inaad ku ogeysiisaa loo-shaqeeyahaaga rabitaankaaga inaad ku soo laabato shaqada ugu yaraan 3 bilood ka hor dhammaadka fasaxa. Marka ugu horeysa, waad joojin kartaa qandaraaskaaga ogeysiis la'aan, laakiin waxaad kuheli kartaa magdhow halkii ogeysiis.
Haddii ay dhacdo inaad dooratay inaad ka sii shaqeyso shirkadda, waxaad ku laaban kartaa booskaagii hore ama meel la mid ah haddii loo baahdo. Sidaas darteed faa'iidooyinkaagu waxay la mid noqon doonaan ka hor intaadan bixin fasaxaaga. Waxaad sidoo kale ka faa'iideysan kartaa tababarka si aad naftaada u dhaqanceliso haddii loo baahdo.
Sidee loo qoraa warqad fasax ah abuurista ganacsiga?
Codsigaaga CEMR waa inuu sheegaa taariikhda bixitaankaaga, muddada la doonayo ee fasaxaaga iyo sidoo kale nooca saxda ah ee mashruucaaga. Sidaas darteed waad u adeegsan kartaa tusaalooyinka soo socda codsi fasax iyo ku noqoshada codsi shaqo.
Codsi CEMR ah
Sir / Marwo,
Magaalada gudaheeda, [Taariikh]
Warqad diiwaangashan oo leh qirasho helid
Ujeeddo: Codsiga ka bixitaanka fasax ee abuurista ganacsiga
Aniga oo shaqaale ka ah shirkaddaada, illaa [taariikhda], waxaan hadda ku fadhiyaa booska [jagadaada]. Si kastaba ha noqotee, iyadoo la raacayo qodobka L. 3142-105 ee Xeerka Shaqaalaha Faransiiska, waxaan jeclaan lahaa inaan ka faa'iideysto fasaxa loo abuuro ganacsi, waxqabadkiisu wuxuu ku saleysnaan doonaa [caddee mashruucaaga].
Sidaas darteed waan ka maqnaan doonaa laga bilaabo [taariikhda bixitaanka] ilaa [taariikhda soo noqoshada], sidaas darteed muddo ah [caddee tirada maalmaha maqnaanshaha], haddii aad oggolaato.
Inta aan go'aan kaa sugayo, fadlan aqbal, Marwo, Mudane, hubinta tixgelinta ugu sareysa.
Marka laga hadlayo codsiga dib-u-celinta
Mawduuc: Codsi dib u soo celin
Hadda waxaan ku maqanahay fasax si aan ganacsi u bilaabo tan iyo [taariikhda bixitaanka].
Waxaan halkan kugu ogeysiinayaa rabitaankeyga ah inaan dib u bilaabo shaqadaydii hore ee shirkaddaada, taas oo lagu oggol yahay qodobka L. 3142-85 ee Xeerka Shaqaalaha. Haddii, si kastaba ha noqotee, booskeyga aan la heli karin, waxaan jeclaan lahaa inaan qabto boos la mid ah.
Dhamaadka fasaxeyga waxaa loo qorsheeyay [taariikhda soo noqoshada] sidaas darteedna waan joogi doonaa maalintaas.
Fadlan aqbal, Marwo, Mudane, aniga oo hubinaya tixgelinta ugu sareysa.
READ Email Template ee Dalbashada
Degso "Codsi-codsi-ah-CCRE-1.docx"	Codsi-codsi-ka-CCRE-1.docx - Waxaa la soo dejiyey 2605 jeer - 13 Kb
Download "Xaaladda-ku-soo-kabashada-codsi-1.docx"	Xaaladda-ku-soo-kabashada-codsi-1.docx - Waxaa la soo dejiyey 2582 jeer - 13 Kb
U daa bilow bilowga ganacsiga, warqad codsi bilaash ah Janaayo 8th, 2022Tranquillus
horeKoontada tababarka shaqsiga: wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato
socdaSamee warqad codsi ah Dhaqdhaqaaqa ikhtiyaari ikhtiyaari ah
Warbixinta nashaadaadka, waa aaladda lagama maarmaanka u ah faafinta macluumaadkaaga.
Dhamaadka boostada, qaacidooyinka asluubta leh ee la iska dhaafo
Sirta iimaylka mudaaharaadka oo si wanaagsan loo qoray
isgaarsiinta qoraalka iyo hadalka - tababar bilaash ah (14) xaq u (161) Tababar bilaash ah oo shaqsiyeed iyo mid xirfadeedba (49) Tababbarka bilaashka ah ee ganacsiga (81) Tababar bilaash ah oo Excel ah (28) Tababar xirfadeed (104) tababbarka maaraynta mashruuca (15) tababarka bilaashka ah ee ajaanibta (9) Hababka iyo tallada luqadaha qalaad (22) Tababar software iyo barnaamijyo bilaash ah (20) Qaabka xarfaha (19) mooc (171) google qalab tababar bilaash ah (14) Tababbarka bilaashka ah ee PowerPoint (13) Tababar ku xayeysiinta dukaamada (72) Tababar lacag la’aan ah (13)